काँग्रेसका नेता अमरेशको यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा : ओलीको योजनामा सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काँग्रेसका नेता अमरेशको यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा : ओलीको योजनामा सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण !
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंहले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण केपी ओलीको आग्रहमा तय भएको बताएका छन् । सिंहले पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमलार्इ व्यवस्थापन गर्नकोलागि भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आग्रहमा स्वराज नेपाल आउन लागेको बताएका हुन् । मंगलबार एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै काँग्रेसका तर्फबाट नवनिर्वाचित सांसद् समेत रहेका सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।
नेकपा एमालेले नै विशेषगरी सिंहलाई भारत निकट नेताको रुपमा चित्रण गर्ने गरेको छ । एमालेले भारत निकट मानेका तिनै नेताले मंगलबार यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार अहिले बाम गठबन्धनको नेतृत्व र नीतिको लागि झमेला सिर्जना भईरहेको अवस्थामा त्यसैको व्यवस्थापनको लागि ओलीकै आग्रहमा स्वराज नेपाल आउन लागेकी हुन् । उनले नेपालमा बाम गठबन्धनमा नेतृत्व व्यवस्थापनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताईएको छ ।
अमरेसको यो अभिव्यक्तिलाई भारतले दिनलागेको सन्देशको रुपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । भारतले कुनैपनि नयाँ कुरा दिनेबेलामा यस्तै आफू नजिक मानिएका नेताहरुलाई अभिव्यक्ति दिन लगाउने गरेको छ । यही रणनीति अनुसार अमरेसले यस्तो अभिव्यक्ती दिएको चर्चा पनि चल्न थालिसकेको छ ।
उता एमालेजनमा भने स्वराजको भ्रमण भारत आफैंले सम्बन्ध सुधारको नाममा एकातर्फी योजनाबाट तयार भएको दाबी गरेको छ । नेपालको निर्वाचनपछि निर्माण भएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास रहेको जनाउन भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमण आउन लागेको दाबी एमालेले गरेको छ ।
यी सबै घटनाक्रमको पृष्ठभूमीमा स्वराज बिहीबार काठमाडौं आउँदै गर्दा पहिलो उद्धेश्य नेपालको संविधान, त्यस बमोजिम भएको संसदीय निर्वाचन र त्यसको परिणामप्रति भारतीय समर्थन रहेको जनाउन हो भन्ने देखिन्छ । अर्थात् ओलीलाई नेपालको सत्तामा आउन दिनु हुँदैन भन्ने खुलेआम षड्यन्त्रमा लागेपछि उत्पन्न असहज अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि यो भ्रमण भएको हुनसक्ने अनुमान एमालेजनको छ ।